Myanmar Gays Heaven: GTalk A/C လေးတွေဖလှယ်ရအောင်................
Posted by Myanmar Gays Heaven at 7:08 AM
biggerdick2011@gmail.com (အမှုတ်ခံချင်ပါသည်...top ပါ..လွတ်လပ်စွာခံစားချင်ပါသည်...
ko htet August 20, 2015 at 4:26 AM
kk1234289 မော်လမြိုင်ကပါ only bot girlish ပုံမဟုတ်ပါ ၃၀ years old.
မော်လမြိုင်ကမနွဲ့သော top များနဲ့တွေ့ချင်ပါတယ် kk1234289 ကိုအပ်ပါ
Anonymous December 22, 2013 at 5:03 PM
I'm really gay(bottom only)
I like really men
I don't like bottom gay or bottom homo
My gtalk is zumekoe@gmail.com
kyawzin phyo December 22, 2013 at 5:14 PM
Phoe Taung December 25, 2013 at 7:15 AM
my facebook and gmail phoetaung85@gmail.com
I'm agay but look like boy I want boyfriend top only add me
sexycrazy284@gmail.com at mdy .
Jaysean .jesus December 27, 2013 at 11:18 PM
Shwe po January 4, 2014 at 12:24 PM
nyinyikyaw2040@gmail.com i am bottom. only boy friend add
contact my address biggerdick2011@gmail.com (ဘယ်မြိုနယ်ကလဲ...ကျွန်တော်ကရန်ကုန်က...)
မုံရွာက dreamthakhin2011@gmail.com က top bot ver bi သယ်ရင်းအားလုံးကို
မုံရွာကဘဲ တွေ့ချင်တယ်၊ အတူတူပါပဲ။ ဖုန်းနံ
မုံရွာကပါ တွေ့ချင်တယ်၊ ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါ။
toewana January 6, 2014 at 10:20 PM
ကျွန်နော်ရန်ကုန်ကပါ အသက် 23 , homo ပါ လုံးဝမနွဲ့ပါနွဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်း
မကြိုက်ဘူးဗျညီအကိုလိုခင်နိုင်မယ့် အကိုများညီများ add နိုင်တယ်
ကိုက အသက်၂၆ ညီလိုပဲ နွဲ့တာတွေမကြိုက်ပါ တူတူနေချင်ရင်09428345728 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
MC March 24, 2014 at 2:20 PM
i m 25. not girlish . just want tobfriends. what is ur viber acc? i can't send this gmail.
ပဲခူးကပါ ချစ်သူလိုချင်ပါသည် ကျွန်တော်က bot ပါ စိတ်ဝင်စားသူများ arkar0007 ကိုအပ်နိုင်ပါသည် ၇ုပ်၇ည်ချောမောသူများနှင့်အသက်ငယ်သူများကိုသာဦးစားပေးစဉ်းစားပေးမည်
ဖင်ခံချင်သူများနှင့် စုပ်ပေးမည့်သူများ zayyarmaw41@gmail.com ကို အပ်လိုက်ပါ ရန်ကုန်ကပါ ဖုန်း ၀၉၄၂၀၀၁၉၂၄၂
limkimmoe@gmail.com pyay ကပါ ver ပါ
Anonymous July 9, 2014 at 2:33 AM
ညီ အကိုလဲ ပြည်က ...biggerdick2011@gmail.com ကို add နော်..top only
Anonymous February 21, 2014 at 5:49 AM
secretspydata@gmail.com , ygn , ver
ကျွန်တော်က m to mကိုပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် နွဲ့တာတွေမလိုချင်ပါ ညီအကိုလို နေချင်ပါတယ် အပြန်အလှန်ပေါ့ဗျာ
gmail bro ?
add mine wahaha.sowhat@gmail.com
mg ko February 27, 2014 at 8:16 AM
မန်းလေး ကပါ . ဖင်လိုးချင်ရင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ။ မနွဲ့ ပါ ။ အရပ် ၅ ပေ ၁၀ ။ ၁၅၀ ပေါင်ပါ ။ အသားညိုတယ် ။ mgkooomdy@gmail.com
tun March 8, 2014 at 11:59 AM
im from mdy(bottom only) but not girlish
ramanyafk March 28, 2014 at 10:41 AM
ရှယ်ပေးလိုက်မယ် ကျားဆန်ဆန်ကော မဆန်ဆန်ကော အားလုံး ခံချင်ရင် လုပ်ပေးမယ်
supercoffeeman5@gmail.com ကိုအပ်လိုက် ရန်ကုန် အချိန်မရွေးနေရမရွေးလာနိုင်ရင် ပိုအဆင်ပြေတယ် နိုပါသော မမ ကိုကိုများလည်းလုပ်ပေးမယ် as like ladyboy
ပြင်ဦးလွင်ကပါ အသက်က ၁၈ အရပ်က ၅ပေ၈ ပါ စိတ်ဝင်စားရင် linthukoko1@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပါ
Tohankyo June 29, 2014 at 3:07 PM
Tohankyo@gmail ba.lee kyi kyi body tawt tawt top only myer sat twel ba
glassylay July 6, 2014 at 10:17 AM
တစ်ကယ်ကိုနွဲ့တာမကြိုက်ပါ ပြီးတော့မနွဲတဲ့ ယောကျာင်္းဆန်ဆန် ဟိုမို တစ်ယောက်နဲ့ အရင်နှီးဆုံး ညီကို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နားလည်မှုရှိတဲ့သူနဲ့ တွေ့ချင်ပါသည်..ကျနော်က ၇န်ကုန်သမိုင်းကပါ အသက် 25 ပါ Glassylay2014@gmail.com ကိုအပ်ပေးပါနော်
LEE SOCHI July 8, 2014 at 9:54 PM
top only...biggerdick2011@gmail.com....အမှုတ်ခံချင်တယ် ...ဆက်သွယ်လိုက်နော်
toponlyman July 11, 2014 at 2:00 AM
Naypyitaw မှ sex လုပ်ချင်သူများဆက်သွယ်ပါ Gtalk - toponlyman@gmail.com
Shock December 14, 2014 at 12:08 AM
ပဲခူးကပါ ယောကျာ်းလိုပဲနေတော့ အပြင်မှာသူငယ်ထောင်ရတာအဆင်မပြေလို့ top တစ်ယောက်လောက်လိုချင်ပါတယ် အမှုတ်ကောင်းပါတယ် ပါးစပ်ထဲပြီးလဲရပါတယ် အရမ်းခံချင်နေပါတယ် shock6600@gmail.comကို အက်ပေးပါဗျာ
bot ပါ 09250711139 viber သုံးသည်
Ye Lin May 8, 2015 at 3:38 AM
vzo ကနေထုပြပေးမယ် taung69@vzo
မျိုးချစ်​​အောငိ မျိုးချစ်​​အောင်​ July 28, 2015 at 1:40 PM
machitthumg.mm.96@gmail.comကိုဆက်သွယ်ပါ top ပါ ခံချင်သူများဆက်သွယ်လိုက်ပါ
gipsy bird August 14, 2015 at 8:30 PM
0973018558 ygn viber come
min khant moe October 1, 2015 at 7:42 AM